Ndingaite Sei Kuti Ndiunze Nhata Kubva Kumba Kweumwe Munhu Imba Yevamwe - Matipi Emumba
maziso maviri ane mavara anoreva
nei iphone yangu isiri kuwana sevhisi
hapana sim kadhi iphone 5s
Can I Bring Fleas Home From Someone Else S House
Ndinogona kuunza nhata kumba kubva kumba kweumwe munhu? . Ehe!, Dzimwe nguva nezvipfuyo zvako kana mune zvisingawanzoitika mune dzako hembe. Nhata zviri zvekunze utachiona izvo fudza paropa of shiri kana zvipuka . Pane zviripo 2000 dzakasiyana marudzi yezvipembenene, asi iyo inowanzo kuwanikwa ichitapura dzimba kana kuparadza zvipfuyo zvipfuwo ikatsi nhata ( Ctenocephalides felis ).
Nhata dzinounzwa mumba nedzimwe mhuka. Kufanana netumwe tupukanana tupukanana, nhata dzine simba rekubereka kwazvo. Vakadzi vanogona kukandira mazai makumi mana kusvika makumi mashanu pazuva. Mukadzi mumwechete anogona kumisikidza kusvika 2000 mazai muhupenyu hwake, achipa zvipembenene izvi mukana wakanakisa wekuwedzera kana zvikasadzorwa munguva.
Ivo vanounzwa mudzimba kunyanya nedzimwe mhuka dzakagumburwa, senge zvipfuyo, mhuka dzesango, kana huku.
Nhata idenda risingaperi
Vasati vava vanhu vakuru, iyo maruva pfuura nepanhanho yepupuru nekugadzira coconho sirika. Mukati memakoko aya, nhata idzi dzinopesana nemishonga yekuuraya zvipuka, saka nhata dzevanhu vakuru dzinogona kuoneka kunyangwe mushure mekurapa mumba nemhuka dzine hutachiona.
Ivo zvakare vanogona kumirira kwemwedzi mukati mekoko kuti ive yakakwana tembiricha uye mwando, kana kunyange kumirira kuvepo kwevaenzi. Iyo yekupedzisira inowanikwa nekuona kudengenyeka kunogadzirwa nekufamba kwevanhu kana mhuka dzinovaraidza, nekuona kuburitsa kwekabhoni dhayokisaidhi inogadzirwa nekufema, kana nekuona kumanikidza pane pupa. Nekudaro, ivo vanogona kumirira munzvimbo isina chinhu mumba isina chinhu kusvikira yagarwazve.
Maitiro ekuona hutachiona hutachiona mumba mako
Kuona kwekutanga kwehutachiona mukati memusha ndiyo kiyi yekutonga kwakawanda. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kunyatsoteerera kune hunhu hwezvipfuyo mumba. Kana ivo vachiwanzo kukwenya pamakumbo avo, musana, kana dumbu, vanogona kunge vane nhata. Muchiitiko ichocho, zvakakosha kuti uongorore mhuka kuti uwane chero hutachiona hwezvipembenene izvi.
Kazhinji zvinonetsa kuona nhata pamuviri wemhuka dzinovaraidza nekuti dzinohwanda nekukasira muhushe, asi zvisaririra zvekuvapo kwavo zvinogona kuoneka, senge fenzi dzvuku dzakasiiwa nekurumwa paganda, kana mutsvina ine ropa. Tsvina inowanikwa pamusoro pemhuka ine hutachiona, kunyanya paganda remutsipa nepasi pemuswe, uye inoita kunge tumapundu tudiki tune rima kana makapisi akafanana nemapepercorns.
Izvo zvinobatsirawo kuongorora nzvimbo dzese dzinowanikwa nezvipfuyo (makapeti, mibhedha kana magumbeze kwavanorara, uye kazhinji chero nzvimbo yavanopfuura kana kuzorora) mazai, maruva, kana vanhu vakuru vanhu. Nhata dzinogona kupa kubva kuzvipfuyo kune vanhu, saka imwe nongedzo pakuvapo kwavo marunda ekurumwa paganda, kunyanya pavanomuka mangwanani, anoonekwa nemucherechedzo mutsvuku unokatyamadza zvikuru.
Maitiro Ekudzivirira Uturu Huturu Pamba
Vanogona here vanhu kutakura nhata kubva kune imwe imba kuenda kune imwe? Ehe!, Matanho ekudzivirira mudzimba anogona kuiswa pamatanho maviri: kunze nekukomba imba, kana mukati. Matanho ekudzivirira ekunze anoenderana nekuderedza mukana wekuti nhata dzichipinda mukati meimba. Izvi zvinoitwa nekubvisa masora kana kuchengetedza huswa hupfupi. Nenzira iyi, isu tinodzivisa kugadzira nharaunda dzinofarira kuberekesa nhata dzinogona kuva sosi yekupinda mukati medzimba.
Kune rimwe divi, zvakakosha kudzivirira mhuka dzesango kuti dzisapinda kana kuvharira mukati memba kana nharaunda, sezvo dzichigona kuve dzinotakura chirwere. Kudzivirira izvi, chimney, maburi, makatsemuka, maburi, kana machubhu ekufemesa mweya ayo mhuka dzinogona kupinda semakonzo, mbeva, squirrel, kana shiri dzinogona kupinda dzinogona kuvharwa kana kufukidzwa nemambure eumhutu.
Kana uine zvipfuwo zvinoenda kunze, unofanirwa kuzvimisikidza kunzvimbo dzakazara nhata nekudzidzivirira kuti dzisasangane nedzimwe mhuka dzine hutachiona. Izvo zvakakoshawo kuchengetedza zvipfuyo nekuisa zvigadzirwa zvezvipfuyo kurwisa zvipembenene zvekunze.
Mukati medzimba, chiyero chakanaka chekudzivirira uye kutonga kudzora kazhinji, kunyanya munzvimbo dzinonyanya kushanyirwa nezvipfuyo. Kuchenesa kwakaratidzirwa kubvisa 95% mazai enhata, pamwe nemamwe maruva nevakuru.
Zvakare, inobvisawo tsvina yakasviba yeropa yakasiiwa nevakuru, inova ndiyo sosi yekutanga yezvikafu kumaruva. Nekudaro, kana, kunyangwe paine rairo yese iyi, iwe usingakwanise kudzivirira kana kudzora nhata kumba, mhinduro yakanakisa yekudzivirira dambudziko kubva mukusadzora nderekutaura ne kambani inoshanda kudzora zvipembenene .
Maitiro Ekuchenesa Imba Yako Mushure meLice